Codsiga Extension-saarayay - Digital Warshadaha Co., Ltd.
oo kordhiyey daabacaadda 3D ridaya incustry
3D daabacaadda leedahay faa'iido xawaare aad u cad in wax soo saarka Dufcaddii yar yar, oo ay leedahay faa'iidooyin cad ee horumarka ah ee qaar ka mid ah mashaariicda, sida baabuurta, aerospace, duulista, military, tareen, mooto, markabka, qalabka farsamo, bamka biyaha, warshadaha dhoobada , iwm
kala duwan oo ka mid ah waxyaabaha loo shubay dhaqanka in ay adag tahay in la soo saaro oo kaliya laga been abuurtay by 3D daabacaadda sida 0.5mm garbaha marawaxadaha, aayado saliid qaboojinta gudaha kala duwan, iyo castings qaab adag oo kala duwan. Macaamiisha Kuwan waxaa ku faafay adduunka oo dhan.
Xabbadood tahay, noocyada kala duwan ee wasakhahaasi soo saarka mass sidoo kale la ballaaran loo isticmaali karaa.
Iyada oo ku saleysan codsiga of technology RP, line horumarinta wax soo saarka cusub, taas oo loo isticmaalo RTV Silicon Rubber wax taaj oo kale iyo Vacuum loo shubay, ayaa haatan si weyn loo codsadaa in ay beerta gaari, electronic iyo iwm caafimaadka
Qar: Low-karka wax taaj oo kale duray reaction (wax taaj oo kale Epoxy)
Qar waa hab cusub oo codsatay in ay wax soo saarka ee moldings degdeg ah. Waa isku dar ah ee qalabka laba-qayb polyurethane, kuwaas oo lagu mudaa caaryada degdeg ah hoos heerkulka caadiga ah iyo cadaadis hoose, oo la aasaasay by hababka kiimikada iyo jirka sida polymerization, crosslinking iyo solidification qalabka.
Waxay leedahay faa'iidooyinka oolnimada sare, wareegga-soo-saarka gaaban, habka fudud oo qiime jaban. Waxaa ku haboon wax soo saarka yar-yar maxkamad geedi socodka horumarka sheyga, iyo sidoo kale wax soo saarka yar-mugga, qaab-dhismeedka fudud ee cover iyo wax soo saarka ee alaabta qaro weyn-deyran ku weyn qaro weyn-deyran iyo sinnayn waa.
wasakhahaasi Khusayso waa: caaryada dumin kara, caaryada ABS, aluminium daawaha wax loo shubay caaryada, wax polyurethane laba-qayb guryaha jireed, la mid ah PP / ABS, sheyga uu leeyahay anti-gabowga, saameynta iska caabin xoog leh, shahaado sare oo taam ah, loading fudud iyo dejinta sifooyinka.
Mabda'a shaqo qar wax taaj oo kale perfusion low-karka waa sida soo socota: laba-qayb pre-sameeyay (ama multi-qayb) alaabta ceeriin dareere ah waxaa lagu quudin galay madaxa isku dhafka dhex bamka Electricity-a at cabirku yahay gaar ah, ka dibna si joogto ah ku shubtay galay caaryada si ay u sameeyaan wax taaj oo kale solidification falcelin. sixitaanka ratio ayaa waxaa lagu gaarayaa by isbeddel ku xawaaraha bamka, taas oo ay gacanta xaddiga dheecaan unit ee bamka iyo waqtiga la duray.
Carbon fiber / fiber xoojiyeen balaastigga (FRP) hordhaca vacuum
mabda'a aasaasiga ah ee nidaamka hordhaca vacuum ah waxaa loola jeedaa oo yeynan fiber galaas, dhar fiber galaas, qobays kala duwan, maro sii daayo, cusbi lakabka permeable, oo yeynan dhuumaha cusbi oo daboolaya nylon (ama caag, on gel lakabka jubbadda daawayn). Silikoon) film dabacsan (ie bac vacuum), filimada iyo ubucda ah saabka yihiin si adag u xidh shaabadeeyey.
saabka waxaa daadgureeyay iyo cusbi ah waxaa lagu duraa saabka. habka wax taaj oo kale A taas oo cusbi a waxaa lagu cufay weheliyaan biibiile cusbi a iyo dusha fiber a under vacuum in impregnate xidhmo fiber ee heerkulka qolka ama ka yar kululaynta.
isku dhafan ee 3D technology daabacaadda iyo technology shubay dhaqanka ayaa keenay in technology shubay degdeg ah. mabda'a aasaasiga ah waa in la isticmaalo technology daabacaadda 3D si toos ah ama si dadban daabacan xumbo lumay, caaryada polyetylen, muunad wax, template, caaryada, core ama qolof for loo shubay, ka dibna isu geeyo habka loo shubay dhaqanka in ay si deg deg ah ku tuuray qaybo bir ah.
isku dhafan ee 3D technology daabacaadda iyo habka loo shubay siinayaa play buuxa in faa'iidooyinka daabacaada 3D si dhakhso ah, kharash yar, awood u leeyahay inuu sameeyo qaybo adag oo tuuray nooc kasta oo bir ah, iyo waxa aan la saameeyeen qaabka iyo cabbirka, iyo qiimo jaban. Ay isku jira waxaa loo isticmaali karaa in ay ka fogaadaan liito, aad bay u fududaynta iyo yaraynta habka of design dheer, ka beddelidda, uhabeynta in wax taaj oo kale.
shubay Investment loola jeedaa hab cusub oo ah ku ridaya birta, sidoo kale loo yaqaan caaryada buuxa, vaporization, oo loo shubay cavityless. noocooda ayaa laga sameeyey oo xumbo (xumbaynaysa BALAASTIKADA) iyo waxaa badanaa la ballaariyey polystyrene. caaryada wanaagsan waxaa ka buuxsamay cammuudda kabka (FOVNDRY cammuudda) si ay u sameeyaan a caaryada (caaryada), iyo kaasaa run ah, waayo, caaryada xun. Marka biraha la shubay ayaa lagu mudaa caaryada (ie, caaryada ee polystyrene ka dhigay), xumbada ka baxa ama uu lumo, taasoo ka dhigeysa caaryada xun ee cammuudda macdantu la biraha la shubay ka buuxsamay. Qaabkan loo shubay markii dambe qaateen bulshada sculptor iyo waxa ay hadda loo isticmaalo wax soo saarka warshadaha.
size badan oo printer SL 3D waxaa lagu talinayaa, sida 3DSL-600Hi la mugga dhismaha 600 * 600 * 400 mm iyo mashiinka weyn ee 3DSL-800Hi la mugga dhismaha 800 * 600 * 550mm.